फागुन ०४ गते मंगलबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल हेर्नुस् कस्को भाग्य कस्तो ! – NepalajaMedia
फागुन ०४ गते मंगलबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल हेर्नुस् कस्को भाग्य कस्तो !
February 15, 2021 196
मेष ( चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ )
आटे गरेका काम पुरा भइ धनको लाभ हुन सक्छ । ब्यापारमा पनि सामान्य लाभ हुने देखिन्छ । कमाई बढ्नाले सुख बढ्नेछ । विगतको श्रमबाट पनि धन लाभ हुनेछ । आर्थिक क्षेत्रमा उन्नती हुनेछ । यात्राको योग रहेको छ । परिवारमा पनि खुशिको माहोल छाउनेछ
।वृष ( इ, उ, ए, ओ, वा, वि, वु, वे, वो )
ब्यापारमा गरेका प्रयासहरु सकारात्मक रहनेछन् । यात्रा पनि रमाइलो हुनेछ । साथीभाइसंग भेटघाट पनि होला । नौलो स्थानको यात्रा हुनेछ । रोकिएका कामहरु बन्नेछन् । धनको प्राप्ती पनि होला । स्वस्थमा सुधार आउने, पढाइमा मन लाग्ने साथै सही निर्णय गर्ने योग छ ।
मिथुन ( का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, हा )
समय त्यति राम्रो छैन । गलत विचार बढ्ने छ । समयमा सहि निर्णय गर्न सकिदैन । रोगले सताउँला । सोच्दै नसोचेको ठाँउमा रुपैँया पैसाको खर्च होला । सोचे अनुसार काम बन्न कठिन छ । नयाँ लुगा, मीठो खानाको आनन्द मिल्नेछ । केही पैसाको हानी पनि होला ।
कर्कट ( हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो )
घरेलु समस्याले सताउने हुँदा काममा अवरोध आउनेछ । त्यसै त्यसै दिक्क लागेर आउनेछ । आत्म विश्वास बढ्नेछ । आफन्तको काममा नै आजको दिन बित्ने छ । अधुरा काम बन्ने तथा नयाँ काम पाउने योग छ । नोकरीमा आफ्नो बर्चस्व बढाउन सकिनेछ, दिन सामान्य नै छ ।
सिंह ( मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे )
परिश्रम गर्दा अरुको विश्वास पनि जित्न सकिनेछ । अधुरा काम बनी मन हर्षित हुने दिन छ । राम्रोसँग कमाई हुनेछ । पठन पाठनमा पनि प्रगति हुनेछ । धन लाभ पनि होला । व्यापार तथा उद्योगमा फाइदाको योग छ । प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्ने छन् । नसोचेको ठाँउबाट केहि लाभ होला ।
कन्या ( टो, पा, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो )
प्रयास गर्दा प्रेममा सफलता पाउने र बैवाहिक बन्धन प्राप्तीको योग छ । टाढाको यात्रा पनि होला । कामहरु सजिलैसँग बन्नेछन् । कामको इच्छा शक्ति पनि बढ्नेछ । रमाइलो तरिकाले कामहरु गर्न पाइनेछ । पशुधन र जमिनबाट सामान्य लाभ होला । ब्यापार भने ठिकै मात्र छ ।
तुला ( रा, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते )
गलत विचार बढ्ने, समयमा निर्णय नहुँदा काममा अवरोध आउने साथै झै झगडा पनि होला । शरिरमा आलस्यता छाउने देखिन्छ । कसैसँग सामान्य बादविवाद पर्ने देखिन्छ । खर्च गर्दा होस पुर्याउनु होला । स्वास्थ्यका लागि खानपानमा सजग रहनुहोला, खर्च पनि गराउन सक्छ ।
वृश्चिक ( तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु )
व्यापारमा सफलताले मन रमाउन छ । धन मनग्य कमाउने अवसर मिल्नेछ । मान सम्मान मिल्नेछ । विशेष सभा समारोहमा सहभागी बन्ने मौका पनि पाइनेछ । हानी नै नगरे पनि काममा बाधा दिनेले खासै प्रगती हुन दिदैनन् । जागीरमा पनि समस्या देखा पर्ने देखिन्छ ।
धनु ( ये, यो, भा, भि, भु, धा, फा, ढा, भे )
ठूला व्यक्तिको आशा र भरोसा पनि तपाई प्रति रहनेछ । बोल्दा धेरै कामहरु सहज हुनेछन् । धार्मिक काममा मन जानेछ । काममा पनि उत्साहजनक समय छ । दिन मनोरञ्जनपूर्ण रहनेछ । व्यापार र रोजगारीका क्षेत्रमा लाभ मिल्नेछ । यात्रामा भने जोगिएर काम गर्नु होला ।
मकर ( भो,जा,जि,जु,जे,जो,ख,खि,खु,खे,खो,गा,गि )
सहयोग र नयाँ मित्रको आगमनले अन्तत आफ्नो मन प्रसन्न हुनेछ । धनको लाभ पनि होला । सोचेका काम बन्नेछन् । केही खर्च लागे पनि सोचेको काम बन्नेछ । नोकरी तथा राजनितीमा गरेका प्रयासहरु फलदाइ रहनेछन् । अरुले तपाइको तारिफ गर्न सक्छन् ।
कुम्भ ( गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, दा )
परिश्रमले आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्न सकिनेछ । नोकरी र राजनितीमा केहि अप्ठ्याराको सामना गर्नुपर्ने छ । सोच्दै नसोचेको ठाँउमा पैसा जाने दिन छ । पेटको खराबीले स्वास्थ्य कमजोर बन्नुका साथै काममा ढिलासुस्ती हुन सक्छ । नयाँ कामको थालनी आज नगर्नु होला ।
मीन ( दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, चा, चि )
नयाँ काम पाउने योग छ । पढाइमा राम्रै उन्नति गरेर अगाडी बढ्न सकिनेछ, दिन राम्रै छ । आय बृद्धि हुने दिन छ । नयाँ कामको अवसर पनि मिल्ला । अँन्नको लाभ पनि हुने दिन छ । कामको सफलताले थप काम गर्ने हौसला मिल्नेछ । धनको साथै अन्नको पनि लाभ हुन सक्छ ।
Posted in राशिफल
Prevदुधसँग खान नहुने १२ खानेकुराहरु जसका बारेमा थाहा नपाएर हामी बिरामी हुन्छौ
Nextयी ६ गल्तीले ल्याउँछ तपाईको ओठमा कालोपन, भुलेर पनि नखानुहोस् यस्ता चिज
कमाउन गएका छिरिङ्ग बाकसमा फर्किए, सम्हालिन सकिनन श्रीमती, बाबाआमाको यस्तो हालत (भिडियो सहित)
राजु परियारले जिउँदै छोरालाई गाडे
के तपाई ३६ वाला कम्मरलाई घटाएर २६ बनाउन चाहानुहुन्छ ? बिहानै पिउनुहोस् यो स्पेशल ड्रिंक
हाम्रा पुर्खा प्रयोग गर्थे यी घरेलु उपाय, जुन एकपटक लगाएपछि कहिल्यै झर्दैन कपाल हेर्नुहोस
प्याजले यसरी बढाउन्छ घण्टौसम्म यौ’न आनन्द, कसरी प्रयोग गर्ने ? (14402)
ज्योतिषविज्ञान भन्छ : यी महिना जन्मिने व्यक्ति करोडपति (5733)